Iphrofayela Yenkampani - WEITAI
I-WTM Travel Motor
I-PHV Final Drive
MAG Izikhangibavakashi Motor
I-JMV Track Drive
I-700CK Track Drive
I-WBM Track Motor
I-PCR Swing Motor
I-MSG Swing Motor
I-M2X / M5X Swing Motor
I-WSM Swing Motor
I-Weitai Hydraulic ingenye yabahlinzeki be-hydraulic abahola phambili eChina, amabhizinisi okuqala wokubacindezela agxile ebhizinisini lokuthekelisa amashumi eminyaka. Sizibophezele ekuhlinzekeni imikhiqizo nezinsizakalo ze-hydraulic ezinhle kakhulu kumabhizinisi nakubasebenzisi bokugcina emhlabeni wonke.
Ekuqaleni kokuqala, singabakwa-OEM factory, futhi siye sathuthuka saba yinkampani ephelele yokuhlanganisa ukukhiqizwa, ukuhweba nokutshalwa kwezimali. Izinjini ze-Hydraulic zingenye yemikhiqizo yethu eyinhloko. Ngaphezu kwamafektri ethu wokubacindezela, singumninimasheya womenzi wekhwalithi ephezulu wokubacindezela. Amafektri ethu wonke aqinisekisiwe nge-ISO futhi abahlinzeki bethu bezinto ezibonakalayo bonke bathole izitifiketi ze-CE, RoHS, CSA kanye ne-UL. Singakwazi ukuklama nokwenza ngezifiso ngokusho kwemidwebo ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende.
Imikhiqizo yezimoto ifaka kepha ayikhawulelwanga kuma-motor motors, ama-swing motors nama-wheel-motors. Ama-motors ethu anesakhiwo sokuklama esithuthukile futhi ahlinzeka ngokusebenza kahle kwevolumu ephezulu, amandla aphezulu nokuzinza okuhle okuphakeme kakhulu kunama-motors esincintisana nawo. Lokhu kuholele ekufunweni nasekukhiqizweni kwama-Motors wokuhamba angaphezu kwama-40,000 we-Weitai ngo-2019. Ama-Weitai motor motors manje asefakiwe kulayini wokukhiqiza wabakhiqizi be-excavator abanjengoSANY, XCMG kanye ne-SDLG.
Njengenkampani kaNobhala weShandong Hydraulic Association's (SDHA) kanye nenkundla ephelele yokuthekelisa yenhlangano yesifundazwe yokubacindezela, u-Weitai uyaziqhenya ngokumela iChina futhi sabelane ngemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme yokubacindezela nomhlaba. I-Weitai Hydraulic isivele ikhethelwe ukuba yiBhizinisi Elivelele Lonyaka lonyaka wezi-2018 Engqungqutheleni Yaminyaka Yonke kanye Nesithangami Sokukhiqiza Esinobuhlakani seShandong Equipment Manufacturing Association, futhi sizama ukwakha njalo kule mpumelelo.